La Wadaag Arag Fikradaha Print Magaalada Kismayo waxaa ka socota xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Warbixin ku saabsan Xafladdaas oo weli socota waxaa hadaladdii ilaa iyo hadda laga jeediyay inoo warbixintan kooban inooga haya. Maxamed Colaad Xassan. Dhinaca kale, Dowladda Soomaaliya ayaa Mar labaad ku Celisay in aysan aqabli karin Duulimaad toos ah oo Nairobi Kismaayo ah , Waxaase Maanta Barqadii Kismaayo ka degay diyaar toos ah oo waday Wafdiga uu hogaaminaayay Aadan Barre Ducale, gudoomiyaha Aqlabaiydda Baarlamaaka Kenya ee ka qeyb galay caleema saarka Axmed Madoobe. Haddaba Arintan ayaa loo Sababaynayaa khilaafka ka dhaxjira Soomaaldia dhaxdeeda gaar ahaan Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada Prof Liibaan Xuseen Ciise, oo Wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ayaa sheegaya in Muhiim aytahay in Dowladda Soomaaliya ay la fadhiisato Maamul Goboleedyada. Prof Liibaan Ciise, ayaa sheegay in Khilaafka ka dhaxjira Dadka Soomaaliyeed ay Sabab u tahay Xaaaldda Maanta jirta. Dhageyso Caleema-saarka A. Madoobe by VOA The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard La wadaag Facebook La wadaag Twitter No media source currently available 6:0812:11 0:48 Direct link Pop-out player | Somalilandhorta
Browse: Home / La Wadaag Arag Fikradaha Print Magaalada Kismayo waxaa ka socota xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Warbixin ku saabsan Xafladdaas oo weli socota waxaa hadaladdii ilaa iyo hadda laga jeediyay inoo warbixintan kooban inooga haya. Maxamed Colaad Xassan. Dhinaca kale, Dowladda Soomaaliya ayaa Mar labaad ku Celisay in aysan aqabli karin Duulimaad toos ah oo Nairobi Kismaayo ah , Waxaase Maanta Barqadii Kismaayo ka degay diyaar toos ah oo waday Wafdiga uu hogaaminaayay Aadan Barre Ducale, gudoomiyaha Aqlabaiydda Baarlamaaka Kenya ee ka qeyb galay caleema saarka Axmed Madoobe. Haddaba Arintan ayaa loo Sababaynayaa khilaafka ka dhaxjira Soomaaldia dhaxdeeda gaar ahaan Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada Prof Liibaan Xuseen Ciise, oo Wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ayaa sheegaya in Muhiim aytahay in Dowladda Soomaaliya ay la fadhiisato Maamul Goboleedyada. Prof Liibaan Ciise, ayaa sheegay in Khilaafka ka dhaxjira Dadka Soomaaliyeed ay Sabab u tahay Xaaaldda Maanta jirta. Dhageyso Caleema-saarka A. Madoobe by VOA The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard La wadaag Facebook La wadaag Twitter No media source currently available 6:0812:11 0:48 Direct link Pop-out player
La Wadaag Arag Fikradaha Print Magaalada Kismayo waxaa ka socota xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Warbixin ku saabsan Xafladdaas oo weli socota waxaa hadaladdii ilaa iyo hadda laga jeediyay inoo warbixintan kooban inooga haya. Maxamed Colaad Xassan. Dhinaca kale, Dowladda Soomaaliya ayaa Mar labaad ku Celisay in aysan aqabli karin Duulimaad toos ah oo Nairobi Kismaayo ah , Waxaase Maanta Barqadii Kismaayo ka degay diyaar toos ah oo waday Wafdiga uu hogaaminaayay Aadan Barre Ducale, gudoomiyaha Aqlabaiydda Baarlamaaka Kenya ee ka qeyb galay caleema saarka Axmed Madoobe. Haddaba Arintan ayaa loo Sababaynayaa khilaafka ka dhaxjira Soomaaldia dhaxdeeda gaar ahaan Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada Prof Liibaan Xuseen Ciise, oo Wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ayaa sheegaya in Muhiim aytahay in Dowladda Soomaaliya ay la fadhiisato Maamul Goboleedyada. Prof Liibaan Ciise, ayaa sheegay in Khilaafka ka dhaxjira Dadka Soomaaliyeed ay Sabab u tahay Xaaaldda Maanta jirta. Dhageyso Caleema-saarka A. Madoobe by VOA The code has been copied to your clipboard. The URL has been copied to your clipboard La wadaag Facebook La wadaag Twitter No media source currently available 6:0812:11 0:48 Direct link Pop-out player
Posted by Yasmin Ahmed on October 12, 2019 in Ra'yi(Opinion) | 3 Views | Leave a response
Magaalada Kismayo waxaa ka socota xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe.
Warbixin ku saabsan Xafladdaas oo weli socota waxaa hadaladdii ilaa iyo hadda laga jeediyay inoo warbixintan kooban inooga haya. Maxamed Colaad Xassan.
Dhinaca kale, Dowladda Soomaaliya ayaa Mar labaad ku Celisay in aysan aqabli karin Duulimaad toos ah oo Nairobi Kismaayo ah , Waxaase Maanta Barqadii Kismaayo ka degay diyaar toos ah oo waday Wafdiga uu hogaaminaayay Aadan Barre Ducale, gudoomiyaha Aqlabaiydda Baarlamaaka Kenya ee ka qeyb galay caleema saarka Axmed Madoobe.
Haddaba Arintan ayaa loo Sababaynayaa khilaafka ka dhaxjira Soomaaldia dhaxdeeda gaar ahaan Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada Prof Liibaan Xuseen Ciise, oo Wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ayaa sheegaya in Muhiim aytahay in Dowladda Soomaaliya ay la fadhiisato Maamul Goboleedyada.
Prof Liibaan Ciise, ayaa sheegay in Khilaafka ka dhaxjira Dadka Soomaaliyeed ay Sabab u tahay Xaaaldda Maanta jirta.
Dhageyso Caleema-saarka A. Madoobe